Users hit [
at 11:30 AM Labels: Announcement Posted by nyimuyar0comments
After I changed my blog to Myanmar Unicode complaint font, I archived previous Zawgyi font posted as backup in here. If you wanna to read new blog post, please come and read at here
NyiMuYar (2011 January)
နွေဦး ရဲ့လက်ဆောင် ယင်ကောင်
at 3:54 PM Labels: Australia , General , MM Posted by nyimuyar 1 comments
နွေဦး(နွေ) ရဲ့လက်ဆောင် ယင်ကောင်
နွေဦး ဆိုတဲ့ Spring ရောက်လို့ရာသီဥတု ပူအိုက်လာတာနဲ့ အမျှ တော ယင်ကောင်ကြီး (ယင်မမဲ) တွေ သြစတြေးလျှ တိုက် တနံ တလျားမှာ တ၀ီဝီ နဲ့ ပေါ်ထွက် လာပါတော့တယ် ။ ယင်ကောင်ပဲ ဘာဖြစ်လဲ သူဟာသူ နေမှာပဲ လို့ တော့ မတွေးလိုက်ပါနဲ့။ တကောင် နှစ်ကောင်မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ အုပ်လိုက် အုပ်လိုက် ဒီနားလည်း ယင်ကောင် ဟိုနားလည်း ယင်ကောင်
တ၀ီဝီ နဲ့ လူတွေပေါ်လိုက်နားနေတော့တာကိုး။ အကျီတွေပေါ် အ၀တ်အစားတွေပေါ် နားတာ မသိသာပေမယ့် မျက်နှာမှာ နားတာကတော့ တော်တော်ရယ်မှ တော်တော် စိတ်ကသိ ကအောင့် ဖြစ်စရာကြီးပါ။
ဒါပေမယ့် ဒါလည်း ကိုယ်တယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး။ ၀န်ကြီးချုပ်ကစလို့ကလေးအထိ တနိုင်ငံလုံး ကြုံတွေ့ကြရတာပါ။ မျက်နှာမှာ နားတဲ့ ယင်ကောင်တွေကို လက်ကလေးတွေ နဲ့ ခါထုတ် ပုတ်ထုတ် ဖယ်ရှားကြရတာလည်း နွေဦး ကနေ နွေအကုန် ဆောင်ဦး ရာသီ အေးလာတဲ့အထိ လူတိုင်းလုပ်ကြရတဲ့ ဖက်ရှင်လို့ တောင် ပြောလို့ ရပါတယ်။
လ အနေ နဲ့ဆို နွေဦး တတိယလ ဖြစ်တဲ့ နိုဝင်ဘာကနေ စပြီး နွေကုန် တဲ့ မတ်လ လောက် အထိပဲ ဆိုပါတော့။
အလွန်များပြားပြီး လူပေါ်မှာ နားနေတဲ့ ယင်ကောင်တွေ က အမတွေပါ။ ယင်ကောင်အမ တွေက ဥ တွေ ဥဖို့အတွက် ပရိုတင်း လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေရဲ့မျက်ရည် ချွေး ချွဲသလိပ် အစရှိတာကနေ ယူကြတာပေါ့။ အနာရှိရင်လည်း သိတဲ့အတိုင်းပေါ့။ ယင်ကောင် အမတွေမှာမှ အကောင်သေးပြီး ပိန်တဲ့ အကောင်တွေက အငမ်းမရ ဖယ်လို့ မရအောင် လိုက်နေတတ်ပါသတဲ့ ပရိုတင်း ပိုလိုတာကိုး။ ယင်ကောင်အထီး တွေကတော့ အဲ့ဒီ အမတွေ နောက် လိုက်နေတတ်တာဆိုတော့ များပြီးရင်း များရင်းပဲ။
ဒီလောက်များလှတဲ့ ယင်ကောင်တွေက ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ဖြစ်လာသလဲ ဆိုတာ လျှောက်ဖတ်ကြည့်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ဘူးလည်း ပြောလို့ မရပါဘူး။ သြစတြေးလျှမှာ အဓိက ထုတ်ကုန်တခု ဖြစ်တဲ့ အမဲသား လုပ်ငန်းကြောင့် နွားတွေကို အများကြီး မွေးရာက ယင်ကောင်တွေ အထူးများပြား လာရတယ်ဆိုပါတယ်။
ကမ်ဘာ့ ကျွဲနွား ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ နံပါတ် ၇ လိုက်တဲ့ သြစတြေးလျှမှာ ကျွဲနွားကောင်ရေ ခန့်မှန်းခြေ သန်း၃၀ လောက်ရှိပါတယ် ကမ်ဘာပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှ ကျွဲနွားတွေရဲ့၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ တခြား နိုင်ငံတွေက သူ့ ထက်များပေမယ့် တိုက်ရဲ့ရာသီဥတု ကလည်း အထောက်အကူပြုတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ နွားတွေက တရက်ကို နောက်ချေး ၁၂ တုံးလောက် ပါချကြတယ်တဲ့။ နောက်ချေး တတုံးမှာ ယင်ကောင် အကောင် ၂၀၀၀ လောက် ပေါက်ပွားစေနိုင်တယ်လို့
ယူဆကြပါတယ်။ ကဲ နွားကောင်ရေ သန်း၃၀ ဆိုတော့ တွက်သာကြည့်ကြပါတော့။
၁၇၈၈ ခုနှစ် ကိုလိုနီတွေ စရောက်ရောက်ချင်းတုန်း က နွား၅ကောင် ကျွဲ၂ ကောင်ပဲပါပေမယ့် ခုအချိန်မှာ သန်း၃၀ လောက်ရှိနေတော့ ယင်ကောင်တွေ အကြိုက်ပေါ့။ ဒီက ယင်ကောင်တွေက ရာသီဥတု ကို အံတုနိုင်ဖို့ အတွက် အကောင်ကြီးတယ် သန်မာတယ်ပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် တောင်ဖက်ပိုင်း ဒေသက ယင်ကောင်တွေက အေးတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ သေကြေကုန်ကြပေမယ့် ပူနွေး ခြောက်သွေ့ တဲ့ ဒေသတွေမှာတော့ မျိုးပွားထားကြတာပေါ့။ ဟော ဆောင်းကုန် နွေကူးပြီး ပူအိုက်စပြုတဲ့ သြဂုတ်ကနေ နိုဝင်ဘာ လတွေမှာ မြောက်ပြန်လေတွေ နဲ့ အတူ တောင်ဖက်ပိုင်း ဒေသတွေဆီ ယင်ကောင်တွေ ပြန်ရောက်လာကြပါတယ်။
အဲ့ဒီ လေတွေက ဥတွေကို သယ်ဆောင်ထားတဲ့ ယင်ကေင် အမတွေ အများကြီးကို သယ်ယူလာကြတယ်။ တချို့ရက်တွေမှာဆိုရင် လေစီးကြောင်းနဲ့ အတူ ခရီးမိုင် ရာနဲ့ချီပြီး ရောက်သွားတယ်။ အရှေ့ ဖက် ကမ်းရိုးတန်းဖက်မှာဆိုရင် သြဂုတ်လမှ စတိုက်တဲ့ မြောက်ပြန်လေတွေ နဲ့ အတူ ယင်ကောင်တွေက ကွင်းစလန် ပြည်နယ်စပ်ကို စရောက်လာကြပြီး
ကင်ဘာရာကို စက်တင်ဘာ လလယ်လောက်မှာ ရောက်လာကြပြီ။ အောက်တိုဘာ လောက်ဆိုရင် ၀ိတိုရ ပြည်နယ်လောက်စီကို ရောက်တတ်ကြတယ်။ တက်စမေးနီးယား ကျွန်းကိုတော့ ဒီဇင်ဘာလောက်ဆို ရောက်တတ်ကြတယ် ဆိုကြတယ်။
အနောက်ဖက် ကမ်းရိုးတန်းဖက်မှာ ကြတော့ အောက်တိုဘာ လဆန်းလောက်ဆို အနောက်မြောက်ဖက် ကနေ စပြီး ပြန့်သွားလိုက်တာ အောက်တိုဘာ လကုန်လောက်ဆို အနောက်တောင်ဖက် အကုန်ရောက်သွားပြီ။
ပုံမှန်အတိုင်း ပြန့်မယ်ဆို တက်စမေးနီးယား ကျွန်းရဲ့တောင်ဖက် ကီလိုမိတာ ၂၃၀ လောက်အထိ ပင်လယ်ပြင် အထိ လေနဲ့ အတူပါသွားလိုက်တာ ဆောင်းလည်း ပြန်ဝင်လာရော သေလို့ပြုတ်ကျတဲ့ ယင်ကောင်တွေဟာ ငါးစာ အဖြစ် ရောက်ကုန်ကြတယ်တဲ့ ။ သူ့ ဟာနဲ့ သူ သံသရာ လည်နေတာပေါ့လေ။
အောက်တိုဘာ ကနေ စလို့များလာလိုက်တဲ့ ယင်ကောင်တွေဟာ ဒီဇင်ဘာ ဇန်န၀ါရီ အပူဆုံး လတွေမှာတော့ အများဆုံးပါပဲ။ အဲ့ဒီကနေ ပြန်ပြီးလျှော့သွားလိုက်တာ မတ်လလောက်ဆို တော်တော်ကြီးကို ပြန်နည်းသွားကြတယ်။
ဆစ်ဒနီမှာတော့ ယင်ကောင်ပြန့်ပွားမှုက မတည်ငြိမ်ပါဘူး လေ နဲ့ ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့ အတွက် ခုများလာလိုက် ခုမတွေ့ ရလိုက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ အထိ တခါတလေ ယင်ကောင်တွေ မရှိသလောက် နည်းပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုဝင်ဘာ ဒီဇင်ဘာမှာ စပြီးများလာ လိုက်တာ ဇန်န၀ါရီမှာ အများဆုံး ဆိုရမယ်။ အဲ နောက်တော့ မတ်လအထိ လျှော့လျှော့သွားလိုက်တာ မတ်လကုန် ဆို ယင်ကောင် ရာသီ ကုန်ဆုံးပြီ လို့တောင် ပြောလို့ ရသွားပါပြီ။
မဲလ်ဘုန်း မှတော့ စက်တင်ဘာ လဆန်းလောက် ကတည်း စ တွေ့ ရတတ်ပြီး အောက်တိုဘာ နိုဝင်ဘာဆို တော်တော်များနေပြီ။ ဒီဇင်ဘာ ဇန်န၀ါရီ ဆို အများဆုံး လို့ပြောလို့ ရပါတယ်။ ယင်ကောင်လေးတွေ ရဲ့ ပေါက်ပွားမှုလည်း ယင်မမဲကြီးတွေ နဲ့ တူတူမြင့်တက်လာသေးတယ်။
အနောက်ဖက် Perth ဖက်မှာကတော့ တမျိုး။ Perth မှာကျတော့ အောက်တိုဘာ မှာ နဲနဲရှိလာပြီး နိုဝင်ဘာမှာ စများလာလိုက်တာ ဒီဇင်ဘာမှာ အများဆုံးပါပဲ။ အဲ့ဒီဖက်ကျတော့ ဇန်န၀ါရီ ကုန်လောက်ဆို မရှိသလောက် ဖြစ်သွားပြီ။ Perth ဖက်ကတော့ အဲ့လို ပုံမှန်လေး ပေါက်ပွားတတ်တယ်။ ဆစ်ဒနီ လို ခုများလိုက် ခုနည်းလိုက် မဖြစ်တတ်ဘူး။
အပူချိန် ၁၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အောက် ရောက်သွားလို့ရှိရင် ဘယ် ယင်ကောင်မှ မပျံနိုင်တော့ဘူး။ နဲနဲလေး အပူချိန် တက်လာလို့၁၂.၅ လောက်ရောက်လာရင် တချို့ တလေသော ယင်ကောင်တွေက နီးနီးနားနား ပျံနိုင်ကြတယ်။ အပူချိန် တက်လာတာနဲ့ အမျှ ပိုပြီး လှုပ်ရှား ပြီး လူတွေကို ကောင်းကောင်း စိတ်အနှောက်အယက်ပေးတော့တာပဲ။ ၂၇.၅ လောက်ဆို သူတို့ အတွက် စိတ်ကြိုက်ပဲ။ တအား ပူလွန်းတဲ့ ၃၅ လောက်ဆို လူတွေ အရိပ်ထဲမှား နားရသလို့သူတို့ လည် သိပ်လှုပ်လှုပ်ရှားမရှားမလုပ်ဘဲ အနားယူတတ်ကြတယ်။
မျက်စိ နာ တွေဘာတွေလည်း ဖြစ်ပွားစေတတ်တယ်။ ပုံမှန်ကတော့ စိတ်ရှုပ်စရာ ကောင်းတာပါပဲ အသံတ၀ီဝီ နဲ့ မျက်နှာတွေ နားတွေ မျက်စိတွေ နှာခေါင်းတွေ ပါးစပ်တွေ နားမှာ နားနေတတ်ပြီး အခန့် မသင့်ရင် ပါးစပ်ထဲတောင် ၀င်တတ်တယ် ဆိုတော့ စဉ်းစားသာ ကြည့်ကြပေါ့။ မောင်းရင်လည်း မပြေးဘူး လက်နဲ့ ဖမ်းတာတောင် လွယ်လွယ်မိတယ် ဆိုတော့ ဘယ်လောက်အောင် အစာ ပရိုတင်း လိုချင်နေသလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်နိုင်ကြပါတယ်။
ဒီတနှစ်တော့ ရာသီဥတု က တော်တော်နဲ့ မပူဘဲ အေးမြဲအေးနေသေးတော့ ယင်တောင်တွေ အခွင့်မသာသေးဘူး လို့အင်တာနက်မှာ ဖတ်လိုက်ရတော့ စိတ်ကူးပေါက်ပြီး ရှာဖွေရင်း တွေ့ သမျှ ဖတ်မိသမျှ နားလည်သလောက် ရေးချလိုက်ပါတယ်။
ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ တရားတော် သံဝေဇနိယ လေးဌာန
at 8:33 PM Labels: Dhamma , MM Posted by nyimuyar0comments
သီတဂူ ဆရာတော် ဟောကြား တဲ့ "တရားချစ်ခင် သူတော်စင်အပေါင်းတို့ဒီကနေ့ ဟာ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကဆုန်လပြည့်နေ့ ကို ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နိုင်ငံများမှာ ဗုဒ္ဓနေ့ ရယ်လို့ထူးထူးမြတ်မြတ် သတ်မှတ် ပူဇော်ကျင်းပကြပါတယ်။" လို့အစချီဟောထားတဲ့ တရားတော်ကို စာရေးသူကတော့ သီတဂူ ဆရာတော်ရဲ့ခုနှစ်နေ့ ဘုရားရှိခိုး လို့ ပဲ အလွယ်မှတ်ထားပြီး တော်တော်လည်းပဲ နှစ်သက် သဘောကျခဲ့တဲ့ တရားတပုဒ်ပါ။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက စာရေးသူတို့ငယ်ငယ်က အဖေ ၀ယ်လာတဲ့ နောက်ဆုံးဆယ်လ မြတ်ဗုဒ္ဓ သုံးခွေတွဲ ကက်ဆက်တရားခွေ နောက်ဆုံးမှာ စူပါဟိုက်က အပိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့ တရားတပုဒ် အဖြစ် ပါလာတာပေါ့။ ဒါကို နာယူရင်း သဘောကျ နှစ်သက်မိနေတာပါ။ နောက် အွန်လိုင်းမှာ ဓမ္မဒေါင်းလုပ်လို ၀က်ဆိုဒ်တွေ ပေါ်လာပေမယ့် စာရေးသူပဲ မနှံ့စပ်လို့ လားမသိ ရှာဖွေလို့မတွေ့ နိုင်ပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဒီနှစ်ဆန်း ၂၀၁၀ ဖေဖေါ်ဝါရီ မှာ ရန်ကုန်ပြန်တော့ မူလထုတ်လုပ်တဲ့ တေးသံသွင်းမှာ သွားရှာပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ တရားခွေ ချည်းသက်သက် အမ်ပီသရီး လိုချင်တာ မရခဲ့ပဲနဲ့ ဗွီစီဒီ နဲ့ပဲ ရခဲ့ပါတယ်။ အရင် စာရေးသူ သဘောကျတဲ့ တရား နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှပါပဲ။ မကြိုက်တာကတော့ နောက်က တီးလုံးသံ တွေ ပါနေတာပါ။ စာရေးသူကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် ဆရာတော်ရဲ့အသံချည်းသက်သက် ပဲ လိုချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူး ရတာပဲ ၀ယ်လာရတာပေါ့။
သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိသရ ၏ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ တရားတော် သံဝေဇနိယ လေးဌာန (ဖွား-ပွင့်-ဟော-စံ)
ဗွီစီဒီ ဆိုတော့လည်း တမျိုးကောင်းပါတယ်။ သံဝေဇနိယ လေးဌာန ဗုဒ္ဓဂါယာ ကိုပါ ရောက်ဖူး မြင်ဖူးသွားတာပေါ့ လို့တွေးပြီး ဆရာတော်ဟောသလို တရားချစ်ခင် သူတော်စင်များ အတွက်လည်း စေတနာရှေ့ ထားကာ ယူကျူ ချန်နယ် အသစ်ဖွင့်ပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ကြည်ညို သဒ္ဓါပွားများ နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းဖြင့်။
ယူကျူချန်နယ် အသစ်ဖွင့်တော့ ညီမူရာ ဆိုတာ တစုံတဦး တယောက်က မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် သည်ညီမူရာ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ပဲ ဖွင့်လို့ ရလိုက်ပါကြောင်း အသိပေးပါရစေ။
Kindle အတွက် MobiPocket နှင့် ဖိုင်အမျိုးအစား ပြောင်းခြင်း
at 11:45 AM Labels: Kindle , MM , Technical Posted by nyimuyar 1 comments
ကာလီဘာ လိုမျိုး အသုံးဝင်ပြီး အခမဲ့ သုံးလို့ ရတဲ့ နောက်ဆော့ဝဲလ်တမျိုးကတော့ MobiPocket က ထုတ်တဲ့ MobiPocket Creator ပါ။ သူ့ မှာ Home Edition နဲ့ Publisher Edition ဆိုပြီး ၂မျိုးရှိပါတယ်။ Publisher Edition ကမှ ဖိုင်အမျိုးအစား ပြောင်းဖို့အဆင်အပြေဆုံးပါပဲ။ ဒီနေရာ ကနေ အခမဲ့ ရယူ နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါပုံမှာ မိုဘီပေါ့ကတ် ခရီရေတာ ထုတ်ဝေသူ ဆော့ဝဲလ် ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရန် နေရာ
ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစား တော်တော်များများကို ပြောင်းလို့ ရသလို ။ ကိုယ်တိုင် ebook ကို ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်ပြီး သူ့ တို့ဆီမှာ တင်ရောင်းလို့ လည်း ရပါသေးတယ်။ အခု ကတော့ ဖတ်လို့အဆင်ပြေဖို့ပြောင်းနည်းကို ပဲ ရေးသွားမှာပါ။
ထုံးစံ အတိုင်းပဲ ဒေါင်းလုပ် လုပ် စက်ထဲ အင်စတော လုပ်ပြီးလို့ဖွင့်လိုက်ရင် သူ့ ရဲ့ မူလ ပထမ အဖွင့်နေရာကို ရောက်သွားမှာပါ။ Import from Existing File ဆိုတဲ့ ညာဖက် နားက နေရာမှာ ဖိုင်အမျိုးအစား လေးမျိုးကနေ ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။ ဒီတခါမှာလည်း ပီဒီအက်ဖ် ကနေ ပြောင်းမှာမို့Adobe PDF ကို ရွေးနှိပ်ပေးရပါမယ်။
PDF ကိုရွေးခဲ့တာ ဖြစ်လို့PDF icon လေးနဲ့ စတဲ့ wizard ၀င်းဒိုးတခု ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီမှာ မိုဘီပေါ့ကတ် Library ထဲ ထည့်လို(ပြောင်းလို) တဲ့ ဖိုင်ကို ရွေးရမှာဖြစ်ပြီး chooseafile နေရာက Browse ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်ပြောင်းလိုတဲ့ ဖိုင်ကို သွားရွေးရမှာပါ။ Open ဆိုတဲ့ ဒိုင်ယာလော့ဝင်းဒိုး တခုပွင့်လာပါမယ်။
ပြောင်းချင်တဲ့ဖိုင်ကို သွားရွေးပေတော့။ ဘယ်နေရာမှာ သိမ်းမလဲ ဖိုဒါ ကိုပါ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာစကားတို့ပြောင်းပေးမယ့် Encoding တို့ ကိုတော့ မူလပေါ်နေတဲ့ အတိုင်းပဲ ထားလိုက်ပါ။
ရွေးပြီးသွားရင် Import ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Import လုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ Publication Files ဆိုတဲ့နေရာမှာ ခုပဲ ရွေးချယ် Import လုပ်လိုက်တဲ့ ဖိုင်ကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးရင် အဲ့ဒီ ဖိုင်ကို select မှတ်ရွေးပြီး ဟိုးထိပ်က Build ဆိုတာကို နှိပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် Build Publication ဆိုတဲ့ နေရာကို ရောက်သွားမှာပါ။
ပုံမှန်ကတော့ ဘာမှ ပြောင်းစရာမလိုပါဘူး။ တကယ်လို့ကိုယ်က Metadata တွေ စာအုပ်ကာဗာတွေ ထည့်ချင် လဲချင်ရင် ဘယ်ဘက်က သက်ဆိုင်ရာ နေရာတွေမှာ နှိပ်ပြီး ပြောင်းလဲ ဖြည့်စွက်လို့ရပါသေးတယ်။ ခုတော့ ဒီတိုင်းပဲထားပြီး အောက်က Build ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေးကို ပဲ နှိပ်လိုက်ပါ။
လုပ်တာ အောင်မြင် ပြီးသွားရင် Build finished ဆိုတဲ့ နေရာကို ရောက်သွားပါမယ်။ အဲ့ဒီမှာ ပြောင်းပြီးသား နေရာကို ရောက်ချင်ရင် Open folder containing ebook ဆိုတဲ့ နေရာကို ရွေးပြီး OK နှိပ်ပေးရပါမယ်။
ဒါဆိုရင် ကိုယ်ပြောင်းထားတဲ့ ဖိုင်ရှိတဲ့ နေရာကို ရောက်သွားမှာပါ။ ဖိုင်တွေအများကြီး ကြားမှာ .prc ဆိုတဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားကို ရှာရမှာပါ။ တွေ့ ရင် ကော်ပီကူးထားပါ။
ပြီးရင် ကင်ဒယ် ကို ကွန်ပျူတာ နဲ့ ချိတ်ဆက် ပြီး ပထမ တုံးကလို documents folder ထဲမှာ paste ချပေးလိုက်တာနဲ့ MobiPocket Creator (Publisher Edition) နဲ့ ပြောင်းလဲပုံ အဆင့်ဆင့် ပြီးဆုံးအောင်မြင်သွားပါပြီ။
ထုံးစံအတိုင်း အရေးအကြီးဆုံးကတော့ နည်းစနစ်မှန်စွာ ကင်ဒယ်ကို ကွန်ပျူတာကနေ ပြန်ဖြုတ်မို့မမေ့ပါနဲ့ လို့မှာရင်း ရပ်နားပါရစေ။
Kindle အတွက် Calibre နှင့် ဖိုင်အမျိုးအစား ပြောင်းခြင်း
at 11:29 PM Labels: Kindle , MM , Technical Posted by nyimuyar0comments
တကယ်တော့ ကင်ဒယ် က ထိန်းချုပ်မှုများပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို အမေဇုံ ကနေ ၀ယ်မှ ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ အရင်မျိုးဆက်တွေတုန်းက ဆိုရင် PDF ဖိုင်တွေကို ဖတ်လို့ မရပါဘူး။ အခု တတိယမျိုးဆက် ကေ-သရီး မှာတော့ ပီဒီအက်ဖ် ဖိုင်ကို တိုက်ရိုက်ဖတ် လာနိုင်တဲ့အတွက် တော်တော် အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကော်လံထဲ မဟုတ်တဲ့ ကော်လံခွဲထားတဲ့ ဖိုင်တွေ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဖိုင်တွေကို ဖတ်ရာမှာတော့ အခက်အခဲတချို့ရှိနေပါသေးတယ်။
ပီဒီအက်ဖ်ကို ကင်ဒယ်ပေါ်မှာ ဖတ်တဲ့အခါ တမျက်နှာပြီး တမျက်နှာ ဖတ်ရ အဆင်ပြေပေမယ့် zoom ဆွဲပြီး ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဓါတ်ပုံကို ကြီးလိုက်သလို ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် စာမျက်နှာအကုန်ရဖို့navigation arrow keys ခလုပ်လေးတွေကို ရွေ့ ပြီး panning ဖတ်ရတဲ့အတွက် သိပ်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။
ပုံမှန် သူ့ မှာ ဖတ်လို့ ရတဲ့ ဖိုင်တွေကျတော့ (xml html base) ဖိုင်တွေ ဖြစ်လို့zoom ဆွဲလိုက်ရင် ဘရောက်ဇာတွေမှာ ဇွန်းဆွဲကြည့်သလို အချိုးကျ အလိုက်သင့် ကြီးလာတဲ့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပီဒီအက်ဖ် ကနေ ကင်ဒယ် နဲ့ အဆင်ပြေမယ့် ဖိုင်ပုံစံတွေ ပြောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံးကတော့ ကာလီဘာ (calibre one-stop ebook management tool) ပါ။ အမေရိကားရောက်နေတဲ့ စာရေးသူတို့အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတခုက ဆော့ဝဲလ် အင်ဂျင်နီယာ တယောက်က သူ့ အတွက် သူ သုံးဖို့စရေးခဲ့တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ပါ။ အခုတော့ အားလုံးအတွက် အရမ်းကို အသုံးကျနေပါပြီ။ ကာလီဘာ က ဖိုင်အမျိုးအစား တော်တော် စုံစုံကို ကင်ဒယ် အတွက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ History of Calibre
နောင်ကို သက်ထား ကလည်း သူကြိုက်တဲ့ ဖိုင်တွေ ကို ပြောင်းမှာမို့ လို့သူ့ အတွက် ကာလီဘာ ကနေ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းပုံတွေကို ကိုးကားလို့ ရအောင် စုဆောင်းရင်း ပို့ တင်ဖြစ်သွားပါတယ်။
အထက်ပါပုံကတော့ ဆော့ဝဲလ်ကို စဖွင့်ဖွင့်ခြင်း တွေ့ ရမယ့် မူလ ကနဦး အစနေရာ
ပြောင်းချင်တဲ့ pdf ဖိုင်ကို ကာလီဘာ ရဲ့Library ထဲ ထည့်ဖို့Add books ဆိုတာ နှိပ်လိုက်ရင် Select books ဆိုတဲ့ ဖိုင်ဖွင့်တဲ့ ဒိုင်ယာလော့ windows တခု ပွင့်လာမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ပီဒီအက်ဖ် ဖိုင်ကို ရွေးပြီး Open ကို နှိပ်ရပါမယ်။
ချက်ခြင်းဆိုသလို Adding... ဆိုတာပေါ်လာပြီး ဖိုင်ကြီးရင်း ကြီးသလောက် ကြာပြီး သေးရင်သေးသလောက် လျှင်မြန်စွာနဲ့ ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့ ဖိုင်လေး ကာလီဘာ ရဲ့လိုင်ဘရီထဲရောက်သွားပါပြီ်။
ဒါက ကိုယ့်ရဲ့မူလ ပီဒီအက်ဖ် ဖိုင်ကို ကာလီဘာ ထဲ ရောက်အောင် လုပ်တာပဲ ရှိသေးတာပါ။ ကင်ဒယ် နဲ့ ကိုက်မယ့် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖြစ်အောင် မပြောင်းရသေးပါဘူး။ ကင်ဒယ် က ဖတ်လို့အဆင်ပြေမယ့်ဖိုင်ဖြစ်အောင် ပြောင်းဖို့ အတွက် အောက်ကလို ဆက်လက် လုပ်ရမှာပါ။
ပထမဆုံး ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ ဖိုင်ကို ရွေးပြီးမှ Convert books ဆိုတာ ကို နှိပ်ရပါမယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဆပ်မီနူး တခုကျလာပြီး တဖိုင်ချင်း ပြောင်းမှာလား ။ အများကြီးကို တပြိုင်နက် ပြောင်းမှာလား ရွေးပေးရမယ်ပေါ့။ အခု တဖိုင်ခြင်း ပြောင်းမှာ ဖြစ်လို့ Convert individually ကို ရွေးပေးရပါမယ်။
convert (selected file name) နဲ့စတဲ့ ၀င်းဒိုး တခုတက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ထားခဲ့တဲ့ ဖိုင်ကို မြင်နေရမှာပါ။ အဲ့ဒီ နေရာမှာ မတ်တာ ဒါတာ လို့ ခေါ်တဲ့ ဖိုင်ရဲ့အချက်အလက် တွေကို မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်လိုသလို ပြောင်းလို့ဖြည့်လို့ရပါသေးတယ်။
အိုကေ ကို နှိပ်ရမယ်။ တခါ mobi output ဆိုတဲ့ ဘယ်ဘက် အောက်ဆုံးနားက ခလုပ်ကို ရွေးပြီး အိုကေ နောက်တခေါက် (ရှင်ဖုန်း ရဲ့ယိုးဒယား အလိုက် သင်္ကြန်သီချင်း အိုကေနားထား လို ပေါ့) နှိပ်ပေးရပါဦးမယ်။
မူလ ကနဦး နေရာကို ပြန်ရောက်သွားပြီး ကာလီဘာ မူလစာမျက်နှာ အလယ်နားမှာ ကိုယ့်ဖိုင်ရဲ့မူလ ဖိုင်အမျိုးအစား (PDF်) ဆိုတာကို ပြနေပြီး ညာဖက်အောက်ဒေါင့်မှာတော့ တဖိုင်တည်း ရွေးခဲ့တဲ့ အတွက် Jobs: 1 အလုပ်တခုကို လုပ်နေ ပြောင်းနေပါတယ် ဆိုပြီး အ၀ိုင်းလေး လည်ကာ ပြနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ PDF ကြီးရင်း ကြီးသလောက် အရမ်းကြာတတ်ပါတယ်။ (ထုတ်လုပ် ဖြန့် ဝေတဲ့သူတွေက အဲ့ဒီလို အရမ်းအရမ်း ကြာတာကို ဖြေရှင်းဖို့လုပ်နေကြတာမို့နောင်ဆို မြန်လာမယ့် သဘောရှိပါတယ်)
ဖိုင်ပြောင်းလို့ပြီးသွားရင် ကိုယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ ဖိုင်ကို ပေးလိုက်တာနဲ့ ပုံရဲ့အလယ်ညာဖက်မှာ ပထမက မူလ ဖိုင်အမျိုးအစား PDF လို့ရှိနေတာကနေ အသစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ MOBI ဖိုင်အမျိုးအစား ကိုပါတွေ့ ရမယ်။
ဒါဆို ပီဒီအက် ကနေ ကင်ဒယ် က အဆင်ပြေစွာ ဖတ်နိုင်မယ့် မိုဘီ ဖိုင်အမျိုးစား ကို ပြောင်းတာ ပြီးဆုံးအောင်မြင်သွားပါပြီ။
နောက်ဆုံးအဆင့် အနေနဲ့ အဲ့ဒီ ဖိုင်ကို ကင်ဒယ် ထဲ ကူးထည့်ဖို့ ပဲ လိုတော့တာပါ။ အဲ့ဒီလို ကူးဖို့ အတွက် ဆိုတဲ့ Click to open လင့်လေး နှိပ်လိုက်ရင် ပြောင်းပြီးသား ဖိုင်နေရာကို တန်းကနဲ ရောက်သွားမှာပါ။
ဖိုင်ရှိတဲ့ နေရာ ၀င်းဒိုး ပွင့်လာရင် ကိုယ်ကူးယူရမယ့် ဖိုင် မိုဘီ အမျိုးအစား ဖိုင်ကို ကူးယူပြီး
ကင်ဒယ် ကို စက်နဲ့ ချိတ်ဆက်လို့ပေါ်လာတဲ့ drive နေရာကို သွားရပါမယ်။ ပြီးရင် documents folder ထဲမှ paste ချထားလိုက်တာရုံပါပဲ။ ပြီးရင် အရေးအကြီးဆုံး က ကင်ဒယ်ကို ကွန်ပျူတာကနေ USB drive ဖြုတ်သလို safely disconnect ဖြုတ်ချ ပြီးမှ ခလုပ်ဆွဲ ဖွင့် လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ ဖိုင်ကို မြင်တွေ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။
အမ်ပီသရီး ဖိုင် သီချင်း တွေ ကို နားထောင်ချင်ရင်တော့ music folder ထဲမှာ ထည့်ထားရမှာပါ။
တတိယမျိုးဆက် ကင်ဒယ် ကေ-သရီး
at 10:47 PM Labels: General , Kindle , MM Posted by nyimuyar 1 comments
အမေဇုံက ထုတ်တဲ့ အီးဘုတ်ရီဒါ ကင်ဒယ် ရဲ့တတိယမျိုးဆက် ကင်ဒယ်-၃ (ကေ-သရီး) Kindle3စထွက်တာ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ ဆိုတော့ ၁ လကျော်ကျော် ရှိပါပြီ။ ကင်ဒယ် မှာ မြန်မာဖောင့်တွေ ထည့်ထားတဲ့ (Embedded Font ပါတဲ့) pdf ebook မျိုးဆို ဖတ်လို့ ရပါတယ်။ ခုဒီပုံကတော့ မြန်မာ စာအုပ်တအုပ်ကို ကင်ဒယ် ပေါ်မှာ ဖတ်နေတာကို ရိုက်ထားတာပါ။
ကင်ဒယ် မှာ အမ်ပီသရီး သီချင်းလည်း အသံအရည်သွေး ကောင်းကောင်းနဲ့ နားဆင်လို့ ရပါတယ်။ စာရေးသူက ၀ိုင်ဖိုင် ဗားရှင်း ၀ယ်ထားတော့ ၀ိုင်ဖိုင် နက်ဝေါ့ ရှိတဲ့နေရာမှာဆို အင်တာနက် သုံးလို့ ရပါတယ်။ စာဖတ်ဖို့ ပဲ လုပ်ထားတာမို့ လို့အင်တာနက်က တော့ သိပ်သုံးလို့ မကောင်းပါဘူး။
အင်္ဂလိပ် စာအုပ်တွေဆို အသံထွက်ပြီး ဖတ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါတွေ လုပ်ဖို့ကင်ဒယ် ရဲ့ Home Key ကို နှိပ် ပြီးရင်း Menu Key ကို နှိပ်ပြီး မီနူး ကျလာရင် Experimental ကို ရွေး ရပါမယ်။ အဲ့ဒီမှာမှ သီချင်းနားထောင်မလား အင်တာနက်သုံးမလား Text-to-Speech စာအုပ်ကို အသံထွက်ဖတ်ခိုင်းမလား လုပ်ရမှာပါ။
ကင်ဒယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို အတွင်းကျကျ လေ့လာဖွင့်ကြည့်လိုသူများ အတွက်လည်း EEVblog့ က Dave က တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်ဖို့အထူးပြုထုတ်ထားတဲ့ အီးဘုတ်ရီဒါ တွေထဲမှာ အကြိမ်ကြိမ် လေ့လာပြီးမှ အားပေးခဲ့တဲ့ ကင်ဒယ် (ကေ-သရီး) မှာ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေ ရှိပေမယ့် စာရေးသူ လိုအပ်ချက်နဲ့ အကိုက်ဆုံးဖြစ်လို့သဘောကျ နှစ်ခြိုက်ရင်းနဲ့ ဒီစာကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။
ဆည်းဆာရိပ် ဂီလာနဘိုးဘွားများ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့
at 12:10 AM Labels: General , MM Posted by nyimuyar3comments
မွေးဖွားခြင်း သည် သေခြင်းတရား ဆီသို့ဦးတည်နေသော ခရီးလမ်း၏ အစ - ဟူသော လူ့လောက သဘာဝတွင် အို၊ နာ၊ သေရေးနှင့် မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ကြရမည်မှာ အမှန်တရားပင် ဖြစ်ပေသည်။
ထိုရှောင်လွဲ၍မရသော အကြောင်းတရားများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသူများတွင် ကုသိုလ်ကံ ကောင်းသူများအဖို့၎င်းတို့၏ ဘ၀နေ၀င်ချိန်အထိ မပူမပင် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်သွားနိုင်ကြသော်လည်း ကုသိုလ်ကံ မကောင်းသည့် မိအို ဖအိုများမှာမူ ဘ၀နေ၀င်ချိန် မရောက်ခင်အကြား ဘ၀ကို ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာ ဖြတ်ကျော်နေကြရရှာပါသည်။ အကျိုးပေး ကံကောင်းသည့် ဘိုးဘွားများအဖို့သား၊ သမီး၊ မြေးများနှင့် ပျော်ရွှင်နေချိန်တွင် ကံအကျိုးပေး နည်းလှသည့် ဘိုးဘွားများမှာ ပြုစုစောင့်ရှောက်မည့်သူများ မရှိ၍ သော်လည်းကောင်း၊ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် လက်ခံ စောင့်ရှောက်မည့်သူများ မရှိ၍ သော်လည်းကောင်း အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် လက်ခံ စောင့်ရှောက် ထားရသော်လည်း ဘိုးဘွားများအပေါ် မနှစ်မြို့ သဖြင့် ငြူစူမှု မျိုးစုံအောက်တွင် သိမ်ငယ်စွာ ခံစားနေထိုင်ကြရကာ ဒုက္ခမျိုးစုံနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ကြင်နာစွာ စောင့်ရှောက်မည့်သူ ကင်းမဲ့နေသော ဘိုးဘွားများအတွက် မိသားစုသဖွယ် နွေးထွေးစွာ စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်သော သီးသန့်ရိပ်သာလေး တစ်ခု လိုအပ်လာပါသည်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခိုကိုးရာမဲ့နေကြသော ဂီလာနဘိုးဘွားများအား ကြင်နာစွာဖြင့် ၄င်းတို့ အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်သမျှ ကာလ အပိုင်းအခြားအထိ ၄င်းတို့ အပေါ်တွင် နားလည် စာနာစိတ်၊ သည်းခံစိတ်ဖြင့် ပြုစုယုယပေးမည့် နွေးထွေးသော မေတ္တာများဖြင့် ဖေးမ ကူညီနိုင်ကြစေရန် မ တည်ငွေဖြင့် ဆည်းဆာရိပ် ဂီလာနဘိုးဘွားများ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည် ဖေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်အတွက် အများပြည်သူ စေတနာရှင်များ၏ အကူအညီများ လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဘိုးဘွားများအား နွေးထွေးသော လက်များဖြင့် ဖေးမကူညီကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
အဖွဲ့အမည်၊ ။ ဆည်းဆာရိပ် ဂီလာနဘိုးဘွားများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
တည်နေရာ၊ ။ မစိုးရိမ်ကျောင်း မြို့ ဟောင်းအလယ်ရပ်ကွက် သန်လျှင်မြို့ 
(ယခု ဒဂုံမြို့ သစ်အရှေ့ပိုင်း တွင် ဘိုးဘွားများ လက်ခံထားရှိ)
ရည်ရွယ်ချက် ။ အသက်အရွယ်အိုမင်း၍ ကျန်းမာရေးချို့ တဲ့ကာ ခိုကိုးရာမဲ့နေသော ဘိုးဘွားများအား မိသားစုပုံစံဖြင့် ကြင်နာယုယမှုပေးရန်။
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ ။ အဖွဲ့ဝင် အလှူရှင်တစ်ဦးမှ လှူဒါန်းသော အသင်းပိုင် မြေနေရာတွင် စေတနာရှင်များ၏ အလှူငွေဖြင့် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်၍ လုပ်ငန်းစတင်ရန်၊ ထိုမှ တဖန်အလှူငွေတိုးတက်မှုအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ မြေနှင့် အဆာက်အအုံ တိုးချဲ့၍ ဂီလာနဘိုးဘွားများ ထပ်မံလက်ခံရန်။
လက်ခံမည့် ဘိုးဘွား ၊
(၁) လူမျိုး၊ ဘာသာမရွေး ကျွေးမွေးထောက်ပံ့မည့် သားသမီး၊ ဆွေမျိုးများ မရှိသည့် ကျန်းမာရေးချို့ တဲ့နေသော ဘိုးဘွားများ။
(၂) သား၊ သမီး၊ ဆွေမျိုးများ ရှိသော်လည်း၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်သည့် အခြေအနေမရှိသည့် ဘိုးဘွားများ။
အသက် ကန့် သတ်ချက်၊
အသက်(၇၀) နှင့် အထက်ဘိုးဘွားများ၊
(လိုအပ်ပါက ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ အသက်ကန့် သတ်ချက်ကို အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ ညှိနှိုင်းလက်ခံပါမည်။)
ဂီလာန ဘိုးဘွားများ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု၊
(၁) ဂီလာန ဘိုးဘွားများ၏ လက်ရှိကျန်းမာရေး အခြေအနေ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကို ကြည့်၍ တစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာရှင်များမှ စနစ်တကျ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးရန်။
(၂) ဘိုးဘွားများ ကျန်းမာရေးကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့မှ အခါမလပ် ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သကဲ့သို့အမှုဆောင် အဖွဲ့မှလည်း နေ့ စဉ်အလှည့်ကျ သွားရောက်ကြည့်ရှု၍ လိုအပ်ချက်မှန်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
(၃) ဘိုးဘွားများအတွက် အာဟာရပြည့်ဝ၍ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အစားအစာများကို စီမံကျွေးမွေးခြင်း၊ အသုံးအဆောင်၊ အ၀တ်အထည်နှင့် နေရာထိုင်ခင်း စသည်တို့ အား သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထားရှိစေခြင်း၊ ဘိုးဘွားမျာ၏ ဘာသာဝင်အလိုက် ကိုးကွယ်ပွားများအားထုတ်မှုကို ၄င်းတို့ ၏ဆန္ဒအတိုင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်။
ဥပမာ၊ တရားစာအုပ် ဖတ်ပြခြင်း။ တရားခွေ ဖွင့်ပေးခြင်း။ ရှုမှတ်ပွားများရန်အတွက် လမ်းပြခြင်း။
၀န်ထမ်းရွေးချယ်၊ ။ လူမှုဝန်ထမ်းကိစ္စများကို စိတ်ပါဝင်စား၍ ဆေးပညာတတ်မြောက်သူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အို ဘိုးဘွားများကို ချစ်မြတ်နိုး၍ စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်သူများ။
ဖုန်း၊ ၀၉ ၉၉ ၂၈၅၄၉၊ ၂၀၅၄၅၁
ဒေါ်သက်နွယ် (တရားရုံးချုပ် ရှေ့ နေ)
ဖုန်း၊ ၃၈၈၁၃၂၊ ၀၉ ၉၀၄၃၉၅၉
ဒေါ်ထွေးမြင့် (တရားရုံးချုပ် ရှေ့ နေ)
ဖုန်း၊ ၀၉ ၉၀ ၄၂၄၈၈၊ ၂၉၀၉၆၄
ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း (တရားရုံးချုပ် ရှေ့ နေ)
ဖုန်း၊ ၀၉ ၅၀၅၉၉၈၂
ဒေါ်ရီရီမေ (တရားရုံးချုပ် ရှေ့ နေ)
ဖုန်း၊ ၀၉ ၅၀၅၅၀၆၀
ဖုန်း၊ ၀၉ ၅၁၇၇၃၂၀၊ ၂၉၃၂၈၈ (နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီမှ ၄း၀၀ အတွင်း)
ဒေါ်ခင်မေထွေး (တရားရုံးချုပ် ရှေ့ နေ)
ဖုန်း၊ ၀၉ ၅၀၈၈၂၀၃
ဒေါက်တာ ထားထား (စာရေးဆရာမ စုထား)
ဖုန်း၊ ၀၉ ၂၀၁၇၉၆၁.
Copyright © 2008 nyimuyar-zawgyi | Theme by Got Chance and Nitrogen Designs Blogger Template by akOOgle